3 Mambo Nebhukadhinezari akagadzira chifananidzo+ chendarama, chakanga chakareba makubhiti makumi matanhatu uye chakanga chakafara makubhiti matanhatu. Akachimisa mubani reDhura mudunhu reBhabhironi.+ 2 Nebhukadhinezari samambo akatuma vanhu kuti vaunganidze machinda, vatariri,+ magavhuna, makurukota, vachengeti vepfuma, vatongi, vakuru vakuru vemapurisa+ nevatarisiri vose vematunhu acho kuti vauye kuzotsaurira+ chifananidzo chakanga chamiswa namambo Nebhukadhinezari. 3 Panguva iyoyo machinda,+ vatariri, magavhuna, makurukota, vachengeti vepfuma, vatongi, vakuru vakuru vemapurisa nevatarisiri vose vematunhu vakaungana kuti vatsaurire chifananidzo chakanga chamiswa namambo Nebhukadhinezari, uye vakamira pamberi pechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari. 4 Zvino muzivisi+ akashevedzera kwazvo achiti: “Haiwa imi vanhu, mapoka emarudzi nemitauro,+ zvanzi kwamuri, 5 panguva yamunonzwa kurira kwehwamanda, mutopota, chiridzwa chine tambo zhinji, rudimbwa, chiridzwa chine tambo, mutengeranwa nezviridzwa zvemarudzi ose,+ muwire pasi, munamate chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. 6 Munhu wose asingawiri pasi onamata+ achabva angokandwa+ muvira romoto unopfuta kwazvo.”+ 7 Nokuda kweizvi, panguva iyoyo vanhu vose vakanzwa kurira kwehwamanda, mutopota, chiridzwa chine tambo zhinji, rudimbwa, chiridzwa chine tambo nezviridzwa zvemarudzi ose, vanhu vose,+ mapoka emarudzi nemitauro vakawira pasi, vakanamata chifananidzo chendarama chakanga chamiswa namambo Nebhukadhinezari. 8 Nokuda kweizvi, panguva iyoyo vamwe vaKadheya vakaswedera vakapomera vaJudha.+ 9 Vakapindura, vakati kuna mambo Nebhukadhinezari: “Haiwa imi mambo, raramai nokusingagumi.+ 10 Haiwa mambo, imi makaisa murayiro wokuti munhu wose anonzwa kurira kwehwamanda, mutopota, chiridzwa chine tambo zhinji, rudimbwa, chiridzwa chine tambo, mutengeranwa nezviridzwa zvemarudzi ose,+ awire pasi, anamate chifananidzo chendarama; 11 uye kuti munhu wose aizorega kuwira pasi onamata anofanira kukandwa muvira romoto unopfuta kwazvo.+ 12 Kune vamwe vaJudha vamakagadza kuti vatarisire dunhu reBhabhironi,+ Shadreki, Misheki naAbhedhinego; varume ava havana kukuremekedzai, haiwa imi mambo, havasi kushumira vanamwari venyu, uye havasi kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa.”+ 13 Panguva iyoyo Nebhukadhinezari, akatsamwa uye akashatirwa kwazvo,+ akarayira kuti vauye naShadreki, Misheki naAbhedhinego.+ Naizvozvo varume ava vakaunzwa pamberi pamambo. 14 Nebhukadhinezari akapindura akati kwavari: “Haiwa Shadreki, Misheki naAbhedhinego, ichokwadi here kuti hamusi kushumira vanamwari vangu,+ uye kuti hamusi kunamata chifananidzo chendarama chandakamisa?+ 15 Zvino kana magadzirira kuti pamunonzwa kurira kwehwamanda, mutopota, chiridzwa chine tambo zhinji, rudimbwa, chiridzwa chine tambo, mutengeranwa nezviridzwa zvemarudzi ose,+ mowira pasi monamata chifananidzo chandakagadzira, zvakanaka. Asi kana mukarega kunamata, muchabva mangokandwa muvira romoto unopfuta kwazvo. Ndimwari upi iyeye angakununurai mumaoko angu?”+ 16 Shadreki, Misheki naAbhedhinego vakapindura, vakati kuna mambo: “Haiwa imi Nebhukadhinezari, hatifaniri hedu kukupindurai kana shoko rimwe chete pamusoro peizvi.+ 17 Kana zvikaitika, Mwari wedu watiri kushumira anokwanisa kutinunura. Iye achatinunura muvira romoto unopfuta kwazvo nomuruoko rwenyu, haiwa imi mambo.+ 18 Asi kana zvikasaitika, haiwa imi mambo, zivai kuti hatisi kuzoshumira vanamwari venyu, uye hatisi kuzonamata chifananidzo chendarama chamakamisa.”+ 19 Nebhukadhinezari akabva ashatirwa kwazvo, chiso chake chikachinjira Shadreki, Misheki naAbhedhinego. Akapindura, akarayira kuti vakuchidzire vira nekanomwe kupfuura kukuchidzirwa kwaraigara richiitwa. 20 Akarayira kuti vamwe varume vaiva nesimba+ vaiva muuto rake rehondo vasunge Shadreki, Misheki naAbhedhinego, kuti vavakande muvira romoto waipfuta kwazvo.+ 21 Zvino varume ava vakasungwa vakapfeka majasi avo, nguo dzavo nekepisi dzavo nezvimwe zvipfeko zvavo, vakakandwa muvira romoto waipfuta kwazvo. 22 Shoko ramambo zvarakanga riine hasha uye vira rakuchidzirwa zvakanyanyisa, varume vakatora Shadreki, Misheki naAbhedhinego ndivo vakaurayiwa nomurazvo womoto. 23 Asi vamwe varume ava vatatu, Shadreki, Misheki naAbhedhinego, vakawira muvira romoto waipfuta kwazvo vakasungwa.+ 24 Panguva iyoyo mambo Nebhukadhinezari akatya, akakurumidza kusimuka. Akapindura akati kumachinda ake omuumambo: “Hatina kukanda varume vatatu mumoto vakasungwa here?”+ Ivo vakapindura mambo, vakati: “Hungu, haiwa mambo.” 25 Iye akapindura, akati: “Tarirai! Ndiri kuona varume vana vachifamba-famba vakasununguka mumoto, havana kukuvadzwa, uye wechina anotaridzika somwanakomana wavanamwari.”+ 26 Nebhukadhinezari akabva aswedera kusuo revira romoto waipfuta kwazvo.+ Iye akapindura, akati: “Shadreki, Misheki naAbhedhinego, imi vashumiri vaMwari Wokumusorosoro,+ budai muuye pano!” Panguva iyoyo Shadreki, Misheki naAbhedhinego vakabuda mumoto. 27 Machinda, vatariri nemagavhuna nemachinda makuru+ amambo vakanga vakaungana vakaona varume ava, kuti moto wakanga usina kuva nesimba pamiviri yavo,+ hapana kana bvudzi romusoro wavo+ rakanga rabvuraudzwa, uyewo majasi avo akanga asina kuchinja uye kunhuwa kwomoto kwakanga kusina kusvika pavari. 28 Nebhukadhinezari akapindura, akati: “Mwari waShadreki, Misheki naAbhedhinego ngaarumbidzwe,+ uyo atuma ngirozi yake+ ikanunura vashumiri vake vavimba naye,+ varamba shoko ramambo vakapa miviri yavo, nokuti vaisagona kushumira+ uye vaisagona kunamata+ chero mwari upi zvake kunze kwaMwari wavo.+ 29 Ini ndiri kutema murayiro,+ kuti vanhu chero vapi zvavo, boka rorudzi kana mutauro, vanotaura chinhu chakaipa pamusoro paMwari waShadreki, Misheki naAbhedhinego vagurwe-gurwe,+ uye dzimba dzavo dziitwe zvimbudzi zvevanhu vose;+ nokuti hakuna mumwe mwari anokwanisa kununura kufanana nouyu.”+ 30 Panguva iyoyo mambo akaita kuti Shadreki, Misheki naAbhedhinego vabudirire mudunhu reBhabhironi.+